Ihe mgbochi: Ngwa ntanetịime Web iji wepụ Data
Ngwa ngwá ọrụ weebụ, nke a makwaara dị ka nbudata weebụ ma ọ bụ ngwaọrụ nchịkọta weebụ, emepụtara iji wepu ozi bara uru site na saịtị na blọọgụ dị iche iche.
N'okpuru isiokwu a, anyị ga - eweta gị n'elu 10 ngwá ọrụ weebụ s mgbe:
Import.io maara maka nkà na ụzụ ya dị oke mma ma dị mma maka ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-abụghị ndị mmemme. Ngwaọrụ a nwere dataset nke ọ na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịnweta ibe weebụ dị iche iche wee bubata ha na CSV. Enwere ike ịmepụ ọtụtụ narị puku ebe nrụọrụ weebụ na ngwaọrụ a, ọ dịghịkwa mkpa ịdebanye koodu ọ bụla, wuo 1000 API ma rụọ ọrụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya ka Import.io na-eme ihe niile maka gị. Ngwá ọrụ a dị mma maka Mac OS X, Linux, na Windows ma nyere aka ibudata ma wepụ data na mekọrịta faịlụ na netwọk.
Dexi.io, nke a makwaara dị ka CloudScrape, na-enye anyị ọtụtụ nzacha data. Ọ na-enye aka ichikota na ibudata ọtụtụ data sitere na saịtị ọ bụla na-enweghị nbudata ya. Ọ nwere ike wepụ data oge, ma ị nwere ike mbupụ ya dị ka JSON, CSV ma ọ bụ chekwaa na Google Drive na Box.net.
Webhouse.io bụ ngwa na-eme nchọgharị nke na-enye ohere dị mfe iji hazie data a haziri ahazi na nke a haziri ahazi. Usoro a nwere ike ịdọrọ nnukwu data dịgasị iche iche na otu APIL ma chekwaa ya na RSS, JSON , na XML formats
Scrapinghub bụ usoro nke igwe ojii nke na-enyere aka wepụ data n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla, ị ga - enwe ike ịchọta ihe ọ bụla ị ga - eji mee ka ọ bụrụ na ị ga - ihe ngosi weebụ weputara ihe ntanetị nke na-enye aka wepu data sitere na saịtị dị iche iche Ọ na-ebupụ data na ụdị dị iche iche dịka XML, JSON, CSV, na SQL.
Outwit Hub bụ Firefox tinye na nke ahụ na-eme ka ọchụchọ weebụ anyị dị mfe na nhọrọ ntinye data ya. Ngwá ọrụ a nwere ike ịchọgharị ibe weebụ na-akpaghị aka na wepụ ya onye dị iche iche.
A maara onye na-agbapu ihe maka njirimara njedebe nke data na-enweghị njedebe nke nwere ike ime ka nyocha ịntanetị dị mfe na ngwa ngwa. Ọ na-ebuputa data ị nwetara na ederede Google. Scraper bụ n'ezie freeware nke nwere ike irite ma beginners na ọkachamara programmers. Ọ bụrụ na ịchọrọ idetuo na mado data na clipboard, ị ga-eji ngwá ọrụ a.
Ọ bụ ihe siri ike ma gbanwee ngwá ọrụ weebụ. Ọ nwere ike ịchọpụta nke ọma ihe data bara uru maka gị na azụmahịa gị na nke na-abụghị. Ọ na-enye aka wepụ ma budata nnukwu data ma dị mma maka saịtị dị ka MailChimp na PayPal.
Site na Spinn3r, ọ ga-ekwe omume iwebata data sitere na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi, blọọgụ onwe onye, ​​na nchịkọta akụkọ. Ị nwere ike ịche ha na usoro JSON. E wezụga nbudata ya mgbe nile, ngwá ọrụ a na-enye nchedo spam dị mma ma na-ewepu malware na spam niile site na igwe gị mgbe niile Source .